Ucela usizo emphakathini | News24
Ucela usizo emphakathini
IINSIZWA edabuka eMzumbe esizinze eKloof, uMnuz Njabulo Ndlovu (25), onamathelente ahlukahlukene kubalwa ukulingisa, ukuhlobisa emcimbini (decorating) nokugijima, uthe unxusa osomabhizinisi nomphakathi, ukuba umlekelele ekufezeni amaphupho akhe njengoba ezichaza njengomuntu okhuthele kukona konke akwenzayo.
UMnuz Ndlovu uthe ungumuntu othanda ukufunda izinto ezintsha ezinekusasa elihle empilweni. “Ngiphothule izifundo zami zika matikuletsheni ngo-2003, esikoleni esise-Folweni eMasibongwe High School. Ngesikhathi ngisafunda ngenza izifundo ze-Drama nokuyilapho engabona khona ukuthi nginethalente loku lingisa,” kusho yena.
Uthe emva kokuba aphothule umatikuletsheni kwaba nzima ukuqhubeka nezifundo zakhe, njengoba ayenesifiso sokufundela nezifundo ze-Drama okuyizifundo zokulingisa, kodwa ngena yokungabi nayo imali yokufunda akazange aqhubeke nephupho lakhe.
Uthe: “Emva kokuphothula umatikuletsheni kwaba nzima ukuqhubekela phambili nezifundo, omunye wothisha ababengifundisa wazama ukungilekelela, kodwa nakhona kwaba nzima ngoba yonke into idinga imali futhi nomfundaze kahulumeni angikwazanga ukuwuthola,” kusho uMnuz Ndlovu.
Uthe: “Izinto zashintsha ngesikhathi kushona umama, ngoba uyena umuntu owayenginakekela yize ngamazi isikhathi esincane. Ngangihlala nomama lapho ayeshadele khona, ngesikhathi eshona wangishiya kulowo muzi, okubuhlungu wukuthi ngahlukumezeka kakhulu ngoba ngangingazalwa yilowo baba, ngoba wagcina esekhuluma amagama abuhlungu okuthi phela mina angizalwa nguye.”
Umsamariya olungilelo wabona ukuthi kunenkinga anayo wabe esemlekelela kulokhu akudingayo.
“Kunothisha obizwa ngokuthi uMnuz Dlamini, owayefundisa lapho engangifunda khona, wangithatha wangiphatha njengengane yakhe, engithengela izingubo zokugqoka nokudla. UNkosikazi wakhe umgumthungi futhi uhlobisa amatende emcimbini eyehlukene, wangifundisa konke okuphathelene nokuhlobisa, kuyimanje ngiwumpetha ekuhlobiseni,” kusho uMnuz Ndlovu.
UMnuz Ndlovu uqhube wathi iphupho lakhe wukuqala ibhizinisi elenza imisebenzi yonke ephathelene nokuhlobisa imicimbi, ucela umphakathi noma ngabe wubani onothando lokumlekelela ekufezeni iphupho lakhe. Uthe: “Ngingajabula uma kungaba khona umuntu ongangi lekeleka ekufezeni leli phupho ngoba ngiyazi ukuthi nginethalene lokuhlobisa futhi ngiwumuntu okhuthele kakhulu futhi ozithobile, “kusho yena.
Uma kukhona onesifiso sokulekelela uMnuz Njabulo Ndlovu angashayela inombolo ethi: 078 074 9264.